मिर्गाैला – Health Post Nepal
मृत्युको पाँचौँ कारण बन्न सक्छ मिर्गौलारोग
आज विश्व मिर्गौला दिवस। ‘मिर्गौला स्वास्थ्य सबैका लागि, सबै ठाउँमा’ भन्ने मूल नाराका साथ विश्वभर यो दिवस मनाइन्छ।
नेपालमा पनि विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम गरी मिर्गौला दिवस मनाइँदै छ । नेपालमा मिर्गौलाबारेको न्यून चेतना तथा आर्थिक विपन्नताका कारणले मिर्गौलारोगीको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको विशेषज्ञहरूको भनाइ छ।
विश्वमा करिब ८५ करोड मानिस मिर्गौलाको कुनै न कुनै रोगबाट पीडित छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनको एउटा अध्ययनअनुसार हरेक १० जना बयस्कमध्ये एकजनालाई मिर्गौलाको समस्या छ।
विश्वमा मानिसको मृत्युको एउटा कारक मिर्गौलाको समस्या पनि हो। र एउटा अनुमान के गरिएको छ भने, सन् २०४०सम्ममा मिर्गौला रोग मृत्युको पाँचौँ कारण बन्न सक्छ।
काठमाडौं उपत्यकाबाहेक प्रदेश स्तरमा डायलाइसिस गर्नका लागि सरकारी अस्पतालहरुमा सुविधा छैन।
दाङकाे लमहीमा मिर्गाैला दिवसकाे अवसरमा निकालिएकाे प्रभातफेरी। तस्बिर : पत्रकार प्रियास्मृति गजमेरकाे वालबाट
मिर्गौला फेल भएपछि उपचारको दुईवटा मात्र विकल्प रहन्छन्– डायलाइसिस र प्रत्यारोपण । नेपाल सरकारले पछिल्लो समय यी दुवै सेवा निःशुल्क गरेको छ।
प्रत्यारोपणपछि बिरामीले नियमित औषधि सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन सामान्य नेपालीको पहुँचमा छैन । यही समस्याका कारण पनि निःशुल्क प्रत्यारोपण सुविधा हुँदाहुँदै पनि डायलाइसिसबाटै जीवन लम्ब्याइरहने अवस्था आएको मिर्गौलारोग विशेषज्ञ डा. ऋषिकुमार काफ्ले बताउँछन् । सरकारले प्रत्यारोपणपछि मासिक करिब २५ हजारका दरले अवश्यक पर्ने औषधिसमेत निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
विश्वमा धेरै अगाडिदेखि सुरु भएपनि नेपालमा सन् २००८ देखि त्रिवि शिक्षण अस्पतालका मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा सुरु भएको हो । एक दशकअघि त्रिवि अस्पतालबाट सुरु भएको मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा हाल सरकारी र निजी गरी आधा दर्जन अस्पतालमा विस्तार भएको छ । हालसम्म जम्मा ८ वटा अस्पतालले प्रत्यारोपण अनुमति पाएका छन् भने ६ वटाले सेवा दिइरहेका छन्। सेवा सञ्चालनको १२ वर्षको अवधिमा करिब १ हजार ३ सयभन्दा बढीको प्रत्यारोपण गरिएको अस्पतालहरूको तथ्यांकले देखाएका छन् ।
Posted in मुख्य खबरTagged मिर्गाैला, विश्व मिर्गौला दिवसLeaveaComment on मृत्युको पाँचौँ कारण बन्न सक्छ मिर्गौलारोग
Posted in मिर्गौलाTagged डा. अनिल पोखरेल, मिर्गाैला, स्टार अस्पताल1 Comment on आफू एक वर्ष बुढो हुँदा मिर्गौला कति बुढो भयो होला? अवश्य जाँच गराउनुहोस्!